Calaamadaha la heli karo ee kuu oggolaanaya inaad sameyso wicitaanno sir ah | Wararka IPhone
Signal: codsi kuu oggolaanaya inaad sameysid wicitaanno sir ah oo bilaash ah
Alex Ruiz | | Barnaamijyada IPhone, Amniga IPhone
Markasta oo dadka adeegsada aaladaha mobilada sida taleefannada casriga ahi ay aad uga walaacaan amniga iyo sirta xogtooda oo gaari karta gacanta hay'adaha wax basaasa Soosaarayaasha Nidaamka Xiiqda waxay abuureen codsi furan oo la yiraahdo signal, taas oo noo oggolaan doonta inaan qabanno baaqyo qarsoodi ah oo ku saabsan kordhinta amniga iyo asturnaanta. Shirkaddu waxay horey u haysatay codsiyo loogu talagalay Android sida RedPhone iyo TextSecure oo ku duugan wicitaannada iyo SMS siday u kala horreeyaan, hadda waxay la yimaadeen macruufka iyagoo wata 'Signal', oo isku dayaya inuu labada codsi ku daro mid ka fudud.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Signal waa iyada sahlanaanta qaabeynta, waa inaan soo bandhignaa kuwayaga lambarka taleefanka oo waxaan heli doonaa farriin qoraal ah oo leh lambar lagu hubinayo. Wixii intaa ka dambeeya waxaan heleynaa liiska xiriirada adeegsada arjiga iyo waliba xiriirada leh Android iyo barnaamijka RedPhone. Ahaanshaha codsi ah il furan horumariye kasta wuu baran karaa wuuna xaqiijin karaa amniga uu ballan qaadayo. Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud, wuxuu leeyahay tiro aad u tiro badan oo adduunka oo dhan ah, kuwaas oo wicitaannada u diraya qofka qaata. Markii ay marayaan server-yada shirkadda kama tagayaan raad kale, ujeeddooyin dibadeedna waxay u muuqan doonaan oo keliya sida wicitaannada aan u sameyno serverka Signal.
Wicitaano dheeri ah ama codsiyo sir ah oo codsi sir ah ayaa durba soo muuqday, laakiin kuwani badanaa waa la bixiyaa mana lahan adeegsi fudud oo loo adeegsado isticmaalaha. Taasi waa barta ugu adag ee Calaamadda, waa gabi ahaanba waa bilaash waxaana lagala soo bixi karaa app Store. In kasta oo ay weli tahay nooc laga yaabo inuu qalad ku jiro, haddana horumariyeyaasheeda ayaa ka shaqeynaya hagaajinta isla markaana si dhakhso leh isugu daraya taageerada farriinta. Waxaan ku soo lifaaqaynaa isku xirka dheecaan toos ah hoosta xariiqyadan.
Ma isticmaashay signaal? Sidee u aragtaa arjiga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Amniga IPhone » Signal: codsi kuu oggolaanaya inaad sameysid wicitaanno sir ah oo bilaash ah
Alex, boosteejo aad u fiican ...
Way fiicnaan laheyd haddii cinwaanka cinwaanka aad ku darto magaca oo buuxa App-ka kan ah '' Signal- Private Messager ''; tan iyo markii lagu jiray appStore-ka waxaa jira daraasiin codsiyo ah oo loo yaqaan signaal sidaa darteedna wax wareer ah ma jiro
Adal waa sax
Waxaan helay App badan oo ka bilaabanaya Signal ... laakiin kan boostada kujira waa "Signal-Messenger Gaarka ah"
Buundo wanaagsan Adal
Sidii oo kale ayaa igu dhacday…. waa «Saxiix- Rasul Gaar ah»…. waa inay ku raadiyaan wax walba iyo qoraal….
Ku jawaab Andres_RacaVaca
Iima shaqeyso aniga, ma helayo SMS-ka oo wata lambarka ama wicitaanka xaqiijinta.
Hagaag, laakiin maadaama asturnaanta la raadinayo, diiwaan ayaa lagu hirgelin lahaa iyadoo la adeegsanayo magacyada isticmaaleyaasha oo aan ahayn lambarrada taleefannada.
Si aad u sameysid wicitaanno sir ah waxaa jira adeegyo sida Ostel.co oo kuu oggolaanaya inaad isla sidaas sameyso waxaadna isticmaali kartaa taleefan kasta oo jilicsan oo taageera borotokoolka SRTP, marka laga baxayo waa ZRTP oo badanaa lagu bixiyo iPhone. (Bilaash on Android leh CsipSimple pe)
Ku jawaab CARRIZOSA
Laga bilaabo taas haa: Sidii ay horeyba u yiraahdeen: Kuma shaqeynayo oo keliya Saxeex (raadso “Signal-Private Messager”).
Waxay ii ahayd wax xiiso leh inuusan ii oggolaanayn inaan ku xaqiijiyo ku xirnaanta Wi-Fi… Adigoo ka shaqeynaya furitaanka Wi-Fi (kaliya xiriirkeyga 3G ee liita) Waxaan awooday inaan xaqiijiyo qaabka taleefanka (tani waxay kala goyneysaa dhibcaha) .
Ku jawaab Foxi
Waad wici kartaa lambarka taleefan kasta adoo adeegsanaya daqiiqadaha qiimahaaga,? Hadday sidaas tahay, ma jiraan xayiraad shirkadeed? Mise waxay ka imaan kartaa oo keliya Macaamiisha Calaamadaha illaa Isticmaalka Calaamadaha? Ma u baahan tahay wifi internet, 3G, caymis ama maxaa? Maxaan midna dhaheen tanina waa muhiim (ugu yaraan aniga, hehehehehehehehe)
Foojarka. Doqon baan ahay Ma aanan aqrin. Kaliya waxay ka socotaa signalada illaa kuwa isticmaala calaamadaha. Kaalay, sida WhatsApp. By tango, wax kasta oo dhalaalaa maaha dahab. 💩💩💩 (ra'yi shaqsiyeed, dabcan)
Dagaalkii weynaa ee kaftanka ahaa, difaac munaarad cusub oo ka socda Shabakadda Kartoonada
Dhirta iyo Zombies 2 waxaa lagu cusbooneysiiyay heerar cusub